Ku fur Xuduudaha Mareykanka oo leh imtixaanka imaatinka COVID: Shabakada Dalxiiska Adduunka & Safarka Mareykanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Ku fur Xuduudaha Mareykanka oo leh imtixaanka imaatinka COVID: Shabakada Dalxiiska Adduunka & Safarka Mareykanka
Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • News • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Kooxaha warshadaha waxay ku boorinayaan in laga qaado xayiraadaha saaran safarada caalamiga ah ee Mareykanka
Looma safrin dalxiis USA waqtigaan. Tani waxay ahayd jawaabtii Aqalka Cad ee martida Yurub ee rajada ka qabay inay aadaan VISIT USA vacation.
Mareykanka ma qaadi doono xayiraadaha socdaalka ee jira "xilligan" sababo la xiriira walaaca laga qabo kala duwanaanshaha aadka loo gudbin karo ee COVID-19 Delta iyo tirada sii kordheysa ee kiisaska coronavirus-ka Mareykanka, Aqalka Cad ayaa xaqiijiyay Isniintii.
Shabakada Dalxiiska Adduunka iyo Safarka Mareykanka ayaa ku boorrinaya in dib loo furo Mareykanka booqdayaasha ajnabiga ah, laakiin WTN waxay dooneysaa inay ku darto lakab kale oo ilaalin ah - imaatinka COVID sidoo kale socdaalayaasha buuxa ee la tallaalay.
Kala duwanaanshaha Delta ayaa sababaya kororka calaamadaha COVID-19 in kasta oo tallaalku ka socdo labada dhinac ee Atlantic.
Toddobaad ka hor Safarka Mareykanka ayaa riixay qaadista xayiraadaha safarka Socdaallada Yurub.
Maanta Aqalka Cad wuxuu bixiyay jawaab, Safarka Mareykanka ma uusan dooneynin inuu maqlo: “Marka la eego halka aan maanta joogno… iyadoo la raacayo kala duwanaanshaha Delta, waxaan ilaalin doonnaa xayiraadaha safarka ee jira xilligan,” afhayeenka Aqalka Cad Jen Psaki ayaa sheegtay Isniinta, iyadoo xiganeysa faafitaanka noocyada Delta ee Mareykanka iyo dibedda. "Waxaa wata Delta kala duwanaanta, kiisaska ayaa ku soo kordhaya halkan guriga, gaar ahaan kuwa aan la tallaalin oo u muuqda inay sii kordhayaan toddobaadyada soo socda."
Ku xigeenka Madaxa Arimaha Bulshada iyo Siyaasada ee Ururka Socdaalka Mareykanka Tori Emerson Barnes ayaa soo saartay bayaankan soosocda ee ku saabsan go'aanka maamulka Biden ee ku aaddan xayiraadaha safarka.
“Noocyada kala duwani waa kuwo walaac leh, laakiin xuduudaha la xiray kama hor istaagin Delta Delta inuu soo galo Mareykanka halka tallaalku uu si aad ah ugu adkaysiga u leeyahay horumarka fayraska. Tani waa sababta warshadaha safarka ee Mareykanku ay ugu ololeeyaan qof walba oo qaadanaya tallaal - waa wadada ugu kalsoon uguna dhaqsaha badan ee caadi u noqoshada qof walba.
“In kasta oo quruumaha kale, sida Kanada, Boqortooyada Midowday, iyo in badan oo ka mid ah Midowga Yurub, ay dhammaantood qaadeen tallaabooyin ay ku soo dhaweynayaan safrayaasha soo galaya xagaagan iyo dib-u-dhiska shaqooyinka iyo dhaqaalaha maxalliga ah, Mareykanka weli wuxuu u xiran yahay mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha safarka. - Socdaalka socdaalka ee caalamiga ah.
Marka la eego heerarka sare ee tallaalka ee labada dhinac ee Badweynta Atlantikaba, waxaa suurtagal ah in si ammaan ah loo bilaabo soo dhaweynta martida la tallaalay ee suuqyadan muhiimka ah ee soo galaya.
Dr. Peter Tarlow, oo ah gudoomiye Shabakada Dalxiiska Adduunka wuxuu yiri: “Waxaan ku raacsanahay US Travel inaan raadinno hab nabdoon oo aan ugu furno xuduudaheena martida. Waxaan ka codsaneynaa maamulka Biden in aysan u baahneyn oo keliya baaris ama caddeyn tallaal ah markii ay duulimaadka aadayaan Mareykanka laakiin baaritaan kale ay imaadaan iyo ka hor inta aan loo oggolaan inay ka baxaan aagga kastamka garoonka diyaaradaha Mareykanka, ama dekedda laga soo galo. Natiijooyinka degdega ah ee baaritaanka waxaa badanaa lagu heli karaa 15 daqiiqo gudahood, Mareykankuna wuxuu wax ka baran karaa dalal kale, sida Israel tusaale ahaan. Waxaan dareemeynaa inay si isku mid ah muhiim ugu tahay dadka safarka ah ee tallaala iyo kuwa aan la tallaalin. ”
Juergen Steinmetz, oo ah guddoomiyaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka ee fadhigeedu yahay Hawaii (WTN) ayaa intaas ku dartay: “Hawaii waa tusaale wanaagsan oo ah meel loo dalxiis tago oo ay ku jiraan diiwaanno cusub oo cudurro ah inkasta oo ay aad u badan tahay tallaalka COVID-19. Hawaii waxay u furan tahay kaliya socdaalayaasha gudaha waxayna hoosta ka xariiqeysaa sawirka dhabta ah ee waxa laga fiirsanayo markii la ballaarinayo furitaanka dalka martida caalamiga ah mar kale. Hawaii waxay ubaahantahay baaritaanka PCR ee socdaalayaasha aan la tallaalin, laakiin ma lahan baaritaan dheeri ah oo ku saabsan imaatinka ama soo-booqdayaasha soo tallaalay. Imtixaanka PCT-gu aad buu u fiican yahay, laakiin imtixaan dhakhso leh oo lagu qaado qof walba markuu yimaado ayaa sawir kale gelinaya sawirka. ”
Dr. Peter Tarlow sidoo kale waa khabiir ku xeel dheer amniga iyo amniga dalka Mareykanka wuxuuna horey uga soo shaqeeyay mashaariic badan waaxda arimaha dibada ee Mareykanka.
US Travel ayaa ku tilmaantay bayaankeeda.
"Waxaan si xushmad leh uga codsaneynaa maamulka Biden in ay dib u eegaan go'aankooda waqtiga dhow isla markaana ay bilaabaan dib u furista safarka caalamiga ah ee shakhsiyaadka la tallaalay, iyada oo laga bilaabayo marinnada hawada ee u dhexeeya Mareykanka iyo waddammada leh heerar tallaal oo la mid ah."
Iyada oo lala shaqeynayo daneeyayaasha iyo dalxiiska iyo hoggaamiyeyaasha dowladda, ayaa Shabakada Dalxiiska Adduunka ka soo baxay Wadahadalkii Socdaalka ee Dib-u-dhiska. WTN waxay dooneysaa inay abuurto habab cusub oo loogu tala galay kobcinta waaxda dalxiiska oo loo wada dhan yahay oo waara isla markaana laga caawiyo ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe iyo kuwa dalxiiska inta lagu jiro waqtiyada wanaagsan iyo kuwa adagba.
Waa himilada WTN inay xubnaheeda siiso cod maxali ah oo xoog leh isla mar ahaantaana siiso barnaamij caalami ah.
WTN waxay siisaa cod siyaasadeed iyo mid ganacsi oo qiimo leh ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah waxayna siisaa tababar, la-talin, iyo fursado waxbarasho.
Horumarinta Hoggaaminta Kooxda wakhtiyada aan la hubin
Maxaa ka cusub Bahamas bisha Noofambar
2022 Magaalooyinka ugu Deeqsisan Maraykanka
Shaqada fog ee ardayga 2022
Safiiro ku sugan Madrid oo lagu casuumay laaluushka UNWTO...
Marx, Lenin iyo Ho Chi Minh xaflada Engels'...